वडाध्यक्ष अर्कैकी श्रीमतिसँग रङेहात समातिए ! (भिडियो सहित) «
वडाध्यक्ष अर्कैकी श्रीमतिसँग रङेहात समातिए ! (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति : १९ भाद्र २०७५, मंगलवार ०९:५३
हामिले छानेको जनप्रतीनिधी यस्तो छ, जो दुई घटनाले समाजको ऐना देखाउने काम गरेको छ । हेर्नुस घट्ना १ र घटना २ ।
वडा अध्यक्षसँग रङेहात समातिए । भिडियो हेर्नुस !